किन हुन्छ हृदयघात ? लक्षण र रोकथाम के हो ? | ईमाउण्टेन समाचार
असोज १३, २०७८ पढ्न १७ मिनेट
डा. शिवजी सिलवाल, मुटुरोग रोकथाम र नियन्त्रण गर्नसकिने भए पनि यो विश्वव्यापी रूपमा पुरुष तथा महिला दुवैको मृत्युको प्रमुख कारक हो । हरेक देशको स्वास्थ्य सेवासुविधा, जनताको जीवनशैली र देशको आर्थिकस्तर फरक फरक हुने हुँदा मृत्युको कारक पनि फरक फरक हुने गर्छ ।
वस्तवमा यदि कसैलाई दोस्रो पटक हृदयाघात भएको छ भने पहिलो हृदयाघातका जस्तै लक्षण देखा नपर्न सक्छन् । केही मानिसमा कुनै पनि लक्षण नै नदेखिन पनि सक्छ । यसलाई सुषुप्त हृदयाघात भनिन्छ । हृदयाघातको उपचार यसको प्रकृति र गम्भीरतामा निर्भर रहन्छ । हृदयाघातका प्रचलित उपचारमा रगत पातलो पार्ने अर्थात् जमेको रगतलाई पगाल्ने औषधिको प्रयोग (जसलाई थ्रम्बोलाइसिस भनिन्छ), कारडियाक इन्टरभेन्सन् अर्थात् कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी र मुटुको शल्यक्रिया जस्ता प्रक्रिया पर्छन् ।
स्टेन्ट हालसम्म जम्मा तीन किसिमका छन् । ती हुन्- औषधिरहित धातुको स्टेन्ट- जुन सबैभन्दा सस्तो हुन्छ) । अर्को स्टेन्टमा औषधि लेपन गरिएको स्टेन्ट जुन केही महँगो हुन्छ र तेस्रो किसिमको स्टेन्टमा अत्याधुनिक मांसपेशीमै विलय हुने स्टेन्ट पर्दछन् । तेस्रो किसिमको स्टेन्टले जडान गरिएको धमनीमा औषधिका माध्यमबाट यथेष्ट रक्तप्रवाह गराइसकेपछि र धमनीको चोट ठीक भइसकेपछि धमनीको त्यही भागमा विलय भएर जान्छ ।
हाम्रो जस्तो गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा जहाँ मेडिकल इन्स्युरेन्स लागू गरेको छैन, यहाँका जनताका लागि एन्जियोप्लास्टी प्रक्रिया निकै नै महँगो सावित हुन्छ । त्यो नकारात्मक पक्ष हो । अर्कोतर्फ जुन बिरामीमा धेरै धमनी साँघुरिएका वा बन्द भएका हुन्छन् त्यसखाले समस्यामा पनि एन्जियोप्लास्टी प्रक्रिया फलदायी नहुन सक्छ । त्यसरी नै खोलिएको धमनी एन्जियाेप्लास्टीपछि पनि पुनः बन्द हुने वा साँघुरिने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि यहाँलाई धमनी पुनः साँघुरिएको भन्न सकिन्छ । यदि धमनी पुनः साँघुरिएको वा बन्द भएमा बिरामीलाई पुनः छाती दुख्ने हुन्छ र फेरि हृदयाघात हुन पनि सक्छ । पुनः बन्द भएको धमनीलाई दोस्रो एन्जियोप्लास्टी वा कहिलेकाहीँ मुटुको बाइपास शल्यक्रिया वा औषधि उपचारबाट कम गर्न सक्छ ।
हृदयाघात भएका बेला त्यसका लक्षण करिब ३० मिनेट वा बढी समयसम्मका लागि रहन सक्छ । जेसुकै भए पनि यदि हृदयाघात भएको शंका भएमा तपाईंले तत्कालै हृदयरोग उपचार केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । साथै, त्यस अवस्थामा एक ट्याब्लेट एस्पिरिन (३०० मि. ग्रा.) बिरामीलाई तत्कालै खुवाइदिनुपर्छ । तत्कालै गरिएको उपचार बिरामीको मुटुमा धेरै हानि हुनुबाट जोगाउने एक उपयुक्त तरिका हुनसक्छ ।
स्वास्थ्य‐मा वर्गिकृतDr.shivaji silawal
माओवादी र एमालेबीच सम्मानजनक पार्टी एकता हुने: नेता महरा
मुटुरोग के हो र यसबाट बच्न के गर्नु पर्छ? (भिडियो सहित)
मन्त्रालय फुटाउँदा अभिलेख राख्न समस्या